Mety ve raha Pety Rakotoniaina no ben’ny tanàna, Christine Razanamahasoa no filohan’ny mpanolotsaina ? - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Dia samy nanovokovoka ireo kandida. Nisy mihitsy ireo nandraiki-narary na dia mbola tsy nifarana aza ny piropagandy. Henjana ny fifaninanana. Misy ny teny mahery natsipy tamin’ireo mpifaninana zary toa fahavalo mihitsy. Santionany : “Iza no tianareo ny malamalama sa ny efa miketrona ?” Marihina fa maro ny toerana nandrenesana an’izany teny izany na koa ny mitovitovy aminy. Betsaka tokoa ireo efa nahazo taona no mbola mirotsaka ary misy ny tanora dia tena tanora mifaninana amin’ireny efa nahazo taona ireny. Mety azo lazaina ho dadabe sy ny zafiny no mifanandrina amin’ny toerana sasany. Tsy sahy mivantana tahaka izany kosa ilay zokiolona. Voatery miseho manaja tena. “Hazo amoron-tevana sa vato mandondona ?” hoy ny zokiolona mamaly. Fa firy amin’ny Malagasy no mbola mahatsapa ny hevi-dalina fonosin’izany ohabolana izany ? Moa tsy izany va no nahatonga ny Amiraly Ratsiraka zary nanao “pompe” ahitana fa mbola ao ny tanjaka ara-batana ? Santionany amin’ny olana hita io fifanenjehana io.
Leo, tofoka, boboka. Izay no azo ilazana ny kandida sasany somary osa ara-bola. Ny sasany mamono omby amam-polony talohan’ny fampielezan-kevitra, nandritra ary mbola mampanantena ihany koa raha lany. Ny sasany dia ny hoza-pe no hiononana satria hany azo ampiasaina. Ohatra misy ireo kandida mbola mampiasa poster mainty sy fotsy (noir et blanc) na koa mampiasa imprimante à jet d’encre raha numérique ny an’ny hafa na koa banderole lamba raha x-banner (bâche) ny an’ny sasany. Kisary ahitana ny elanelana ireo. Raha ny herin-tsaina tsy hita loatra izay handrefesana izany na dia misy aza ny fandrefesana ny QI, dia tsy manan-danja izany eny an-kianja fanaovana fampielezan-kevitra.
Hanao ahoana ny ampitso ?
“Nanao taratasy fifanarahana fa tsy hifanenjika izahay kandida efatra eto Ambohidratrimo” hoy Clovis Arthur, iray amin’ireo kandida efatra ireo. Tsara. Saingy… “Raha ny fahitako azy dia ho henjana ny fiarahana ao anatin’ny fitantanana ny kaominina na iza ho lany ben’ny tanàna na iza, dia tsy maintsy hiara-hiasa amin’ilay loha lisitra lany ao anatin’ny filan-kevitra kaominaly izy” hoy ity kandida ity. Nomarihany fa ho sarotra ny hanafoana vetivety ny lonilony vokatry ny fahadisoam-panantenana fa tsy lany. Mipetraka hatrany koa ny teny mahery re teny an-kianja na nataon’ny kandida na nataon’ny fikambanana mpanohana.
Marihina fa izay no voalazan’ny lalàna mifehy ny fifidianana kaominaly sy monisipaly. Lany ho ao anatin’ny filan-kevitra ny loha lisitra. Izay no mahatonga ny vata ho tokana ao anaty birao fandatsaham-bato raha toa ka roa ny vata tamin’ny fifidianana tamin’ny 2007.
Ireo kaominina malaza no tena azo anehoana ny olana mety hitranga. Inona no hitranga raha toa i Pety Rakotoniaina no lany ho ben’ny tanàna ary i Christine Razanamahasoa no lany filohan'ny Filankevitra monisipaly ? Na ny mifamadika amin’izay. Izany hoe tsy manana ny maro an’isa izany ny lisitra notarihan’ny ben’ny tanàna amin’io fotoana io. Tranga mety hisy koa izany ao Antananarivo. Lalao Ravalomanana no ben’ny tanàna ary Lalatiana Rakotondrazafy no filohan’ny filankevitra ? Na ny mifamadika amin’izany. Hisy ve ny fampandrosoana raha izany ? Tranga efa niainan’ny mpitantana kaominina tamin’ny taona 1999 izany. Nikatso ny fitantanana kaominina tamin’ny toerana maromaro tamin’izany fotoana izany. Tsy lany ny tetibola, taraiky ny fanapahan-kevitra…
Tsisy fihodinana faharoa
Tsara hodinihin’ny mpifidy izany, alohan’ny handrotsahany ny vatony. Tsara hodinihiny indrindra ireo mbola misalasala. Marihina tsara fa tsy misy ny fihodinana faharoa fa avy hatrany dia vokatra ofisialy izay mivoaka eo. Mila mahafantatra ny mpifidy fa misy amin’ireo kandida ireo “narotsaka” hampizara ny vato. Jereo tsara ny lisitry ny kandida dia ho hita fa hay moa ity lisitra ity sy ity lisitra ity ka mpinamana hatrizay ary dia mirotsaka ho mpifaninana. Efa nisy fifanarahana tany mialohan’ny fampielezan-kevitra. Sarotra ny hanome anarana etoana fa zava-misy izany.
Misy ve ny vahaolana ? Tantara mitohy izany ary hojerena manokana rahefa mivoaka ny voka-pifidianana ofisialy. Samia ho tahian’Andriamanitra ka ho lava andro iainana hahita ny ampitso.
Tantara sy ny Malagasy : Nampizara ny Malagasy ny fitsinjaram-pahefana sy ny fananan-tany - il y a 4 jours
Posa-kevitra : Zary lasa fampandriana adrisa fotsiny ilay ezaka lazaina ho hatao - il y a 5 jours